Kutaurirana: Aimbove PM Moussa MARA anoti zvese! - Tamban RELAY
Kutaurirana: Aimbove PM Moussa MARA anoti zvese!
Mubvunzurudzo iyi, mutungamiri webato reYéléma, Moussa Mara akataura nezvenyaya dzakadai sekutora matanho kwevadzidzisi, mukana wekukurukurirana Iyad Ag Ghali naHamadoun Kouffa, mamiriro ezvechengetedzo munyika. Vaimbova Prime Minister zvakare vanokurukura nezvekuburitswa kwechinguvana kwaAmadou Aya Sanogo pamwe nevanozvidzivirira uye kurwisa huwori
Rise: Kwemavhiki akati wandei, vadzidzisi vanga vari pakuratidzira kuda kunyatsoshanda kweMutemo Nhamba 2018-07 ya Ndira 16, 2018. Ndedzipi mhinduro dzaunokurudzira kuchengetedza gore rechikoro, kupfuura, izvo Chikoro cheMaliya?
Moussa Mara: Iyi nyonganiso ingadai isingasvike padanho iri dai hurumende yaive yakarerekera kutarisana nemamiriro ezvinhu. Vadzidzisi vakayambira kubvira Chivabvu nezve chikumbiro ichi, vaifanira kunge vakateererwa, kukurukurwa uye kubvumidzwa navo nenzira yekuzvidzivirira uye kwete kumirira kunyorwa kwechiratidzo chekurova. Nenzira imwecheteyo, ini handifungi kuti kutyisidzira kwekunyorera vanozvipira kungangopedza kusawirirana, kunyanya sezvo vazvipiri ava vasingazokwanisa kutsiva avo vari kurohwa. Hapana imwe nzira yekubuda mumamiriro ezvinhu kupfuura kutaurirana. Hurumende yakaziva kukosha kwezvikumbiro zvevadzidzisi. Iyo inhanho yakanaka iyo inofanirwa kuteverwa nekuzvipira kukuru kwemari pane izvo zvaziviswa. Kuzvipira kwemari iyi kunofanirwa kuvharwa nematanho ekuchengetedza mari. Kana isu tikatarisa bhajeti renyika ra2020, mari inenge iri chaiyo, kutanga nekudzikisira kwakakosha kwehupenyu hwemasangano, kufamba, kushandiswa kwezvinhu zvemhando yepamusoro ... Chiitiko chinofanirwa tevedza izwi kana tichitaura nezve matambudziko emari. Yekutanga yezviitwa ndeye kudzikisira mitengo yakanangwa kune avo vanotungamira kutanga uye vadzidzisi vachanyatsogutsikana kuti vaedze. Vadzidzisi zvakare vabereki vevadzidzi, saka musafunge kuti vanofara kurova.
Kazhinji, mamiriro echikoro chedu ari kunetsekana uye ndega zvinoda musangano wenyika uye kunyange referendamu! Dzidzo ipuroji yemagariro inoenderera kupfuura yevaya chete vanoita zvechikoro. Isu tinofanirwa kufunga nezvehuwandu hwedu, tarisa zvatiri kuda kuti vana vedu vagare sevagari uye hunyanzvi hwatinoda kuti vave nahwo mumakore gumi, makumi maviri kana makumi mashanu. Tichifunga nezve nzira dzedu uye mamiriro enyika, tinobva tatsanangura chiratidzo, zvinangwa, nzira nemaitiro izvo mugari wemo wese anofanira kupa kuti asvike ikoko, kutanga nevatungamiriri.
Rise: Mumiriri Mukuru weMutungamiri wenyika yeRegional Center, Pr Dioncounda Traoré, achangobvuma kutumira nhume kuzosangana naIyad Ag Ghali naHamadoun Kouffa, kuti vataurirane navo. Unoyera sei chiziviso ichi?
Moussa Mara: Mumiriri Akakwira ari kuyedza kuita manzwiro mazhinji munyika medu izvo zvakakonzereedzawo kurudziro dzakasimba panguva yeNational inclusive Dialogue (DNI), mese mune nzira dzakakwenenzverwa uye padanho repakati. Kana demokrasi ichida kutora mukufunga mafungiro ehuwandu hwevanhu, zvinoenderana nemutemo uyu. Ikozvino, zvinodikanwa kumirira uye kutevera zvawanikwa zvekutanga kutaurirana uye mitsetse yekukurukurirana nemapoka egandanga. Ini pachangu, ndakachengetedzeka zvakanyanya maererano nekubudirira kwea nhaurirano idzi, nekuti ndinotya kuti tarisiro dzinogona kuratidzwa nemapoka idzi hadzienderane neyakavakirwa nyika yenyika uye inoshivirira uye yakavhurika nzanga sevamwe. nzanga yeMaliya mune dzakasiyana siyana. Tichaona zvinozoitika zvinotevera.
L'Essor: Ndeupi maoni yaunoita iwe pamusoro pechangobva kuburitswa kwekuratidzira kwaAmadou Aya Sanogo nevabati pamwe nevadziviriri?
Moussa Mara: Kana ndikatenda zvakataurwa neMuchuchisi, ichi chisarudzo chinokurudzirwa nemutemo uye nemutemo chete. Iyi nyaya inofanirwa kurapwa zvinoenderana nemutemo uye chete izvo, kuchengetedza kufungidzirwa kwekusava nemhosva paine chokwadi chekuti hapana kusarangwa. Ichi chikonzero nei muyedzo unofanirwa kurongeka nekukurumidza kuitira kuti vabereki vevakabatwa vasimbiswe pane izvo chaizvo zvakaitika.
Rise: Ndedzipi mhedziso yePau Summit, yakaitwa masvondo mashoma apfuura pakati pevakatungamira veG5 Sahel nemumwe wavo weFrance, pamwe nekutangazve kwebasa reChibvumirano chekuongorora Monitoring (CSA), sekureva kwavo iwe, zviratidzo zvakanaka kuti uvandudze mamiriro ekuchengetedza?
Moussa Mara: Pau Summit yakaguma nezvisarudzo izvo, kana zvikaitwa zvizere uye nekutsunga nemapoka eSahelian neFrance, zvichabatsira kudzikisa kutyisidzira kwehugandanga. Imwe yemhedziso yayo ndeyekubatana kwakasimba pakati pevarwi veFrance neSahelian. Kubatana uku kuchasangana, semuenzaniso, kubatana kwakasimba uko kunotibvumidza kuti tide chifananidzo cheFrench mweya pakaitika kurwiswa kwenzvimbo dzedu, sezvaive zvakasarudzika nyaya muSokolo munguva pfupi yapfuura; nekudzokororwa kweawa zvakanyanya kubvumira kudzorera kurwisa uye kukonzera kukuvara kumapoka emagandanga. Imwe yedzakanakisa nguva dzekurova mapoka evapanduki ndipo pavanorwisa nzvimbo dzatinogara nekuti panguva iyoyo ivo vanenge vakafarirana uye vanoshandisa nzira hombe vasati vaaparadzira mushure meava vatadzi. Kana sarudzo dzaPau dzikateverwa nemazvo, mapoka emagandanga achazeza kurwisa nzvimbo dzedu uye kutya kunogona kuchinja mativi.
Kune Komiti Yekutarisa, pakupedzisira iri mubvunzo wekukurumidzira kuitwa kweChibvumirano cherunyararo. Izvi zvese zviri nyore uye zvakaomarara, nekuti zvinoenderana zvachose nemapato eMaliya, mamwe acho ekutenda kwakashata. Saka isu ngativei netariro yekuti isu nekukurumidza tinoona michero yekuitwa kwesungano, kunyanya kune veMaliya.
Rise: Iwe unofunga here kuti mhinduro yedambudziko rakakura iro rakazungunusa nyika yedu kubva muna 2012 inoda kuzadzikiswa kweiyo mhedzisiro yeYunivhesiti National Dialogue, iyo inosanganisira sangano riri kuuya resarudzo dzemutemo?
Moussa Mara: Yakabatanidzwa National Dialogue, kunyangwe isina kurongeka, yaita kuti vabudise nzira dzakakosha dzekugadzirisa nyika yedu. Kugadziriswa ina, kurudziro zana uye zviuru zvemazano akagadzirwa pamagetsi mapuratifomu anogadzira zvishandiso zvinobatsira pakuvandudza kweMaliya. Nekudaro, kushanda kwavo kwakanaka uye kwakasimba kunoda mamiriro ezvematongerwo enyika nemagariro izvo zvisiripo nhasi. Kukwikwidzana parizvino mune zvematongerwo enyika kuMalawi kwakanyanya zvekuti hazvitomboita manyama amire nerongo kana kutungamira sarudzo dzakafanana nesangano rezvemitemo, renzvimbo, dzematunhu ... Kune kusawirirana kukuru pakati pevatambi. zvematongerwo enyika uye zvemagariro. Zvichida pane izvi kuti zvinokurudzirwa kushanda zvisati zvaitika. Tinoshuva kuti zviremera zvive nekuona kwepamberi kwakakosha kuti vazive nzira yekutarisa matambudziko nenzira kwayo uye nenzira kwayo.
Rise: Munguva dzichangopfuura, zviito zvinoverengeka zvakaitwa mumunda wekurwira huwori. Munoverenga sei uye munogadzirisa mhinduro dzipi kurwisa denda iri rinotambudza hupfumi hwenyika?
Moussa Mara: Huori haungomiriri hupfumi hwenyika chete, hunobvarura hukama hwedu hwemagariro uye hunhu huipi hwakanyanya mu Mali. Sezvandakareva munguva yakapfuura, huori hwakanyanya kuMali kupfuura mubvunzo weKumaodzanyemba uye ugandanga. Avo vanokanganisa mari yeruzhinji vanokuvadza zvakanyanya kuMali kupfuura mapoka emagandanga. Paunotanga kurwisa zvakakomba kubva kuchakaipa ichi, ichi chikonzero chetariro. Asi ichi chingori mavambo, ngatimirire kuona miedzo yekutanga yekutanga uye kuti vakuru vakuru vanorangwa! Ivo veMalawi nokudaro vanozotanga kuve nekuvimba uye tariro itsva dzichabvumirwa nyika yedu.
Kubvunzurudzwa naMasa SIDIBÉ
Tags: dioncounda traoréMoussa Mara
Belgique: Jean-Jacques Coppée: «Je comprends pourquoi le prince a…
Inde: Delhi HC entendra aujourd'hui un plaidoyer sur «l'âge…
India: Kutukwa, kurova, kutambudzwa - sei ...
Nyaya iyi yakatanga kutanga http://bamada.net/interview-lancien-pm-moussa-mara-dit-tout-dans-lessor
TELES RELAY 21756 Posts 0 mashoko
YouTube inopemberera makore gumi nemashanu - VIDEO
Kupisa kweAntarctic kunosvika makumi manomwe ematanhatu kwenguva yekutanga, vesaenzi vanodaro
unogona zvakare kuda Zvimwe zvinyorwa zvemunyori
Belgique: Jean-Jacques Coppée: «Je comprends pourquoi le prince a pu être meurtri»
Inde: Delhi HC entendra aujourd'hui un plaidoyer sur «l'âge minimum uniforme…
India: Kutuka, kurova, kushushwa - kusaziva uye kutya kwe…
Belgium: Mamiriro ekunze: chando, anokanda pamusoro 80 km / h uye yambiro ku ...
Sevha zita rangu, yangu email uye webhusaiti yangu mubhurawuza kune yangu inotevera yekutaura.